क्युबा मिसाइल संकट - विकिपिडिया
अक्टोबर १६-२८, १९६२
सोभियत सङ्घले क्युवामा राखेको मिसाइलहरू हटाउने
अमेरिकाले टर्की र इटालीमा रहेको आफ्नो ज्युपिटर मिसाइलहरू हटाउने
अमेरिकाले क्युबाको सरकार हटाउने प्रयास सधैंका लागि अन्त्य गर्ने
वासिन्टन र मस्कोबीच सीधा फोन सम्पर्क हुने हटलाइन सेवा सुरु
वार्सा प्याक्ट अमेरिका
ढाँचा:Country data NATOनाटो
रोवर्ट एफ केनेडी
क्युबा मिसाइल संकट वा १९६२ अक्टोबर संकट (स्पेनी: Crisis de Octubre), the Caribbean Crisis (रूसी: Карибский кризис, tr. Karibsky krizis, रुसी उच्चारण: [kɐˈrʲipskʲɪj ˈkrʲizʲɪs]), वा मिसाइल संकट १३ दिन (अक्टोबर १६-२८, १९६२) १९६२ मा भएको अमेरिका र सोभियत संघ बीच भएको टकराव थियो। शीतयुद्धको त्यो समयमा अमेरिका र सोभियत संघ एकअर्कालाई नामेट पार्न सक्ने आणविक हतियार भण्डार गरेर बसेका थिए । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ४५ वर्षसम्म करोडौं मानिसको यथार्थ थियो । विनासको खतरा १९६२ को अक्टोबर महिनाको १३ दिन सबैभन्दा नजिक भएको थियो । ‘क्युवन मिसाइल सङ्कट’ भनिने यो घटनाको सुरुवात अमेरिकाले गरेको थियो ।
१ घटनाको पृष्ठभूमिको
२ क्युवामा सोभियत मिसाइल
३ तेस्रो विश्वयुद्धको सँघार
४ गोप्य वार्ता
५ सङ्कटको सुरक्षित अवतरण
६ क्युवन मिसाइल सङ्कटपछिको परिवर्तन
६.१ सोभियत संघमा असर
६.२ क्युवामा असर
६.३ अमेरिकामा असर
६.४ विश्व घटनामा असर
घटनाको पृष्ठभूमिको[सम्पादन गर्ने]
१९५९ मा अमेरिकाको फ्लोरिडाको तटबाट ९० माइल (१४० कि.मि.) टाढा रहेको क्युवामा फिडेल क्यास्ट्रोको कम्युनिस्ट शासन स्थापना भयो । फिडेल अमेरिका समर्थित तानाशाह बाटिस्टालाई क्रान्तिबाट हटाएर सत्तामा आएका थिए । फिडेल क्यास्ट्रोको यो सरकार अपदस्त गर्नका लागि अमेरिकाले १९६१ को मेमा क्युवामा आक्रमण गर्यो । यसका लागि अमेरिकाले क्युवाली क्रान्तिमा भागेर फ्लोरिडा गएका क्युवाली आप्रवासीलाई प्रयोग गरेको थियो । सीआईए मार्फत तालिम गराएर यी क्रान्तिविरोधी आप्रवासीलाई हतियार दिएर क्युवा पठाइएको थियो । ‘बे अफ पिग इन्भ्यासन’ नाम दिइएको अभियान असफल भएपछि अमेरिकालाई विश्वव्यापी लज्जा भोग्नुपर्यो । १९६१ को बे अफ पिग्स इन्भेसन नामक असफल अभियान र इटाली र टर्कीमा अमेरिकी जुपिटर ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र को उपस्थितिको कारण, सोभियत नेता निकिता ख्रुस्चेभ क्युवाको आग्रह अनुसार परमाणु क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्न राजी भए। यो सम्झौता १९६२ जुलाईमा ख्रुस्चेभ र क्यास्ट्रो बिचको गोप्य बैठकको दौरान भएको थियो र मिसाइलको निर्माणको सुरुवात त्यस वर्षको ग्रीष्म मा भयो। यसले अमेरिकालाई क्यास्ट्रोलाई हटाउने दबाब परेको थियो ।
सन् १९६२ को जनवरीमा अमेरिकी सेना प्रमुख एडवार्ड ल्यान्सडेलले क्युवाबाट अक्टोबरसम्ममा क्यास्ट्रो सरकार हटाइसक्ने २६ पृष्ठको अति गोप्य प्रस्ताव नै अघि सारेका थिए । यो कुरामा क्यास्ट्रो अनभिज्ञ थिएनन् । क्यास्ट्रोमाथि आफ्नो शासन र क्रान्तिको उपलब्धि जोगाउने चुनौती आइपरेको थियो ।
यसबीच १९६२ को अप्रिलमा सोभियत संघ जोडिएको आफ्नो मित्र राष्ट्र टर्कीमा अमेरिकाले ‘ज्युपिटर’ नामक मध्यम दूरीको व्यालेस्टिक मिसाइल राख्यो । यो मिसाइलले सोभियत सङ्घको राजधानी मस्कोसम्म मार हान्न सकिन्थ्यो । अमेरिकाले टर्कीको अलावा इटालीमा पनि सोभियत सङ्घ केन्द्रित मिसाइल राखेको थियो । यसले विश्वमा शक्तिको होडबाजीमा रहेका दुई विश्वशक्तिमा सोभियत सङ्घ तल परेको थियो । उसलाई तत्काल शक्ति सन्तुलनका लागि कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो ।
यसले क्युवा र सोभियत सङ्घलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो । क्युवालाई आफ्नो अस्तित्व बचाउनु थियो र सोभियत संघ अमेरिकामा मार हान्न सक्ने स्थानमा क्षेप्यास्त्र ( मिसाइल) राखेर शक्ति सन्तुलन बराबर बनाउनुपर्ने थियो ।
क्युवामा सोभियत मिसाइल[सम्पादन गर्ने]
१९६२ को मेमा सोभियत सङ्घका नेता निकिता ख्रुश्चेव र क्युवाली नेताबीच क्युवामा क्षेप्यास्त्र ( मिसाइल ) राख्ने सहमती भयो । त्यसपछि अत्यन्त गोप्य तरिकाबाट सोभियत सङ्घले मिसाइलहरू क्युवामा ल्याउन थाल्यो । क्युवामा तैनाथ गरिएको मिसाइलले अमेरिकाको लगभग सबै स्थानमा मार हान्न सकिन्थ्यो ।
हतियार क्युवा आइरहेको बारेमा केही चर्चाहरू चलिरहेको थियो, जसलाई यसलाई सोभियत सङ्घले पूर्ण रूपमा अस्वीकार पनि गरेन । यसबारेमा प्रश्न उठ्दा अमेरिकाका लागि सोभियत संघका राजदूतले संयुक्त राष्ट्रमा क्युवामा सोभियत सङ्घले रक्षात्मक हतियार मात्र पठाएको बताए ।
१४ अक्टोवर १९६२ मा क्युवामाथि जासुसी गर्न उडेको विमानले सोभियत सङ्घले बनाइरहेको मध्यम दूरीको ब्यालेस्टिक मिसाइलको फाटो खिच्न पुग्यो । भोलिपल्ट यसलाई अमेरिकी सुरक्षविदले पुष्टि गरे । यसको जानकारी पाएको पर्सिपल्ट १६ अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा मामलाको शीर्ष बैठकले यसले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलेको निष्कर्ष निकाल्यो र मिसाइल हटाउन नत्र युद्ध भोग्न तयार रहन सोभियत सङ्घलाई चेतावनी दियो ।
तेस्रो विश्वयुद्धको सँघार[सम्पादन गर्ने]
त्यसपछि सुरु भयो शीतयुद्धको सबैभन्दा तनावपूर्ण १३ दिन ।
यसमा महत्वपूर्ण घटना मध्ये २२ अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्युवा जाने सम्पूर्ण जहाजलाई बीचमा रोक्ने आदेश दिए । तर यसमा एउटा समस्या थियो । समुन्द्रमा आवातजावत अवरोधलाई युद्ध घोषणा सरह मानिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । त्यसपछि केनेडीलाई लेखिएको चिठ्ठीमा ख्रुस्चेभले भनेका छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र र हवाई क्षेत्रको स्वतन्त्र पारवहनमा अवरोध आक्रमक कार्य हो, जसले विश्वलाई आणविक युद्धतर्फ धकेल्छ ।’ त्यसपछिका ६ दिन लगभग आणविक युद्ध सुरु भइसकेको थियो ।
अमेरिकाले क्युवाबाट तत्काल मिसाइल हटाउन भन्यो तर सोयिभत सङ्घ र क्युवाले ती हतियारलाई प्रतिरक्षात्मक मात्र भएको बताए । यसबीचमा अमेरिकाले आक्रमणको तयारी गरिसकेको थियो । अक्टोबर २७ मा अमेरिकी सेनाका मेजर रुडल्फ एन्डरसनले उडाइरहेको जासुसी विमानलाई सोभियत मिसाइलले झारिदियो । यो आक्रमणमा जहाजका पाइलट मारिए । सोही दिन सोभियत पनडुब्बी बी–५९ लाई सतहमा रहेको अमेरिकी न्याभल फौजको जहाजले हाते ग्रिनेड आकारको ‘डेफ्थ चार्ज’ हान्यो । यो पनडुब्बीलाई सतहमा निस्कन सन्देश थियो । तर न्याभल फौजलाई थाहा थिएन कि पनडुब्बी आणविक तरपिडोयुक्त थियो । पनडुब्बीमा असर पर्ने गरी हमलालाई युद्ध मानिन्थ्यो । त्यो समय अमेरिकी न्याभल फोजको अनगिन्ती डेफ्थ चार्जको हमलाका कारण पनडुब्बीमो असर गरेको थियो । पनडुब्बीले हमला सुरु गर्नका लागि यसमा रहेका तीन राजनीतिक अधिकारी सबैको सहमती आवश्यक पथ्र्यो । जहाजमा रहेका तीन मध्ये दुई जनाले आणविक तरपिडो हान्नुपर्ने सहमती जनाए तर एक अधिकारी ‘भ्यासिली अरखिभोभ’ले यसमा असहमती जनाए । उनको असहमतीले गर्दा विश्वव्यापी आणविक युद्ध टरेको थियो ।
तर सङ्कट अन्त्य भएको थिएन । इतिहासमा पहिलो पटक अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा सतर्कता ‘डेफ कन २’ मा कायम राख्यो । यो भनेको आणविक आक्रमणको आदेश दिने एक तह मात्र तल हो । सयौं आणविक मिसाइलहरू मार हान्न तयार राखियो । विश्व ध्वस्तको खतरा जनाउने आलङ्कारिक घडीको सुई मध्यरात हुन एक मिनेट बाँकीमा राखियो । (मध्यरातलाई विश्व ध्वस्त सुरु भएको मानिन्छ।)
गोप्य वार्ता[सम्पादन गर्ने]
तर यो बीच पनि दुई देशबीच कूटनीति जारी थियो । अक्टोबर २७ को रात वासिङ्टन डिसीमा अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रपतिका भाइ रोवर्ट केनेडीले गोप्य रूपमा सोभियत राजदूत एनाटोली डोब्रिनिनलाई भेटे । दुईबीच भएको सघन वार्तापछि दुईले सहमतिका बुँदा तयार पारे र आफ्नो नेताहरूलाई मनाउने निधो गरे। सोभियत संघले अमेरिकी निरिक्षणमा क्युवाबाट आफ्नो हतियार हटाउन पर्ने र क्यास्ट्रोले सार्वजनिक रुपमा त्यस्तो हतियार स्वीकार नगर्ने र अमेरिकाले क्युवा माथी आक्रमण बन्द गर्ने सर्त राखिए। अमेरिकाले त्यसको जवाफ ब्राजिल सरकार मार्फत क्युवालाई पठायो कि यदि क्षेप्यास्त्रहरु हटाइएमा अमेरिकाले क्युवामाथी आक्रमण गर्ने छैन। सहमतिको मुख्य बुँदा अमेरिकाले टर्की र इटालीमा रहेको आफ्नो ज्युपिटर मिसाइलहरू हटाउने र क्युवाको सरकार हटाउने प्रयास सधैंका लागि अन्त्य गर्ने र सोभियत सङ्घले क्युवामा राखेको मिसाइलहरू संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा हटाउने भन्ने थियो ।
सङ्कटको सुरक्षित अवतरण[सम्पादन गर्ने]
शनिबार, अक्टोबर २७, सोभियत संघ र केनेडी क्याबिनेट बिचको सघन वार्ता पछि, केनेडी टर्की र दक्षिण इटालीमा लगाइएका सम्पूर्ण क्षेप्यास्त्र हटाउन गोप्य रुपमा राजी भए र ख्रुस्चेभ पनि क्युवाको सबै मिसाइल हटाउन तयार भए। इटालीबाट क्षेप्यास्त्र हटाउने गोप्य सम्झौताको अंग थियो वा थिएन भन्नेमा केही विवाद छ । ख्रुस्चेभले आफ्नी स्मरणपत्रमा लेखेनुसार, जब संकट अन्त्य भयो तब म्याकनमारले इटाली र टर्की बाट क्षेप्यास्त्र हटाउने आदेश दिए। सहमति पछि डोब्रिनिनले मस्कोमा यसबारेमा जानकारी दिए । त्यसको भोलिपल्ट ख्रुश्चेवले रेडियो मस्कोमा बोल्दै क्युवामा रहेको मिसाइल हटाउने निर्णय गरे र सकङ्ट अन्त्य भयो । त्यो समय दुवै सरकारको यो निर्णयलाई अर्कोसँग झुकेको भनेर आलोचना भएको थियो तर आजका इतिहासकारहरूले यो सहमतिले दुवैको रणनीतिक स्वार्थलाई सहयोग गरेको मान्छन् । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण यसले विश्वलाई आणविक युद्धबाट बचायो ।
तर यसमा नेताहरूबीच भएको सानो गलत सञ्चार पनि अथवा फिल्डमा रहेका सेनाको तत्कालीन निर्णयमा हुने तलमाथिले नेताहरूकै प्रयासमा पानी हाल्न सक्थ्यो । भ्यासिली अरखिभोभको साहसी अस्वीकृति नभएको भए आज इतिहास अर्कै हुनसक्थ्यो ।
क्युवन मिसाइल सङ्कटपछिको परिवर्तन[सम्पादन गर्ने]
सोभियत संघमा असर[सम्पादन गर्ने]
क्युवामा असर[सम्पादन गर्ने]
अमेरिकामा असर[सम्पादन गर्ने]
विश्व घटनामा असर[सम्पादन गर्ने]
यो सञ्चारको खाडलले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटना रोक्न लागि अर्को वर्ष वासिन्टन र मस्कोबीच सीधा फोन सम्पर्क हुने हटलाइन सेवा सुरु भयो । यो सङ्कटपछि विज्ञहरूले युद्ध सुरु भएको भए विश्वको एक तिहाइ जनसङ्ख्या मर्ने हिसाब निकालेका थिए । यस्तो भयावह स्थिति बोध गरेर ख्रुस्चेभले अमेरिकालाई दुवैले आणविक हतियार हटाउनेसम्मको प्रस्ताव भएको एक सम्झौता प्रस्ताव गरेका थिए । केनेडीले आफू आफ्नो देशको सुरक्षा क्षेत्रमा रहेका हार्डलाइनरका कारण त्यो हदसम्मको सम्झौता गर्न असमर्थ रहेको बताए । तर यही सङ्कटले निम्त्याएको त्रासका कारण केहीपछि ‘खुल्ला रूपमा आणविक परीक्षण निषेध’ र ‘आणविक अप्रसार सम्झौता’ भयो ।
सहभागीहरू र उल्लेखनीय तथ्याङ्कहरू · आणऊष · णाट्तो · गैर-पङ्क्तिबद्ध आंदोलन · षेआटो · वारसा सन्धि
याल्टा सम्मेलन · सञ्चालन अज्ञात · पोट्सडम सम्मेलन · गौजेनो इफेयर · वियतनाममा युद्ध (1945–1946) · ईरानको संकट 1946 · ग्रीक नागरिक युद्ध · कोर्फ च्यानल दुर्घटना · जर्मनीमा नीतिको पुनर्स्थापना · पहिलो इन्डोकोना युद्ध · ट्रमन सिद्धान्त · एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन · मार्शल प्लान · चेकोस्लोवाक वर्ल्ड यिनी फोटोज 1948 · टिटो-स्टललिन विभाजन · बर्लिन ब्लकड्रेड · पश्चिमी धोखाधडी · आयरन पर्दा · पूर्वी ब्लक · चिनियाँ गृहयुद्ध (दोस्रो चरण)
कोरियाली युद्ध · 1953 ईरानी कप्तान डेट · पूर्वी जर्मनीको 1953 को उत्थान · 1954 ग्वाटेमेला कुपोरेट डेट · भियतनाम विभाजन · पहिलो ताइवान स्ट्रेट संकट · जिनेवा शिखर सम्मेलन (1955) · पोजनन्ना 1956 विरोध · हंगेरी क्रान्ति 1956 · सुअज संकट · स्पुत्न्न्निक संकट · दोस्रो ताइवान स्ट्रेट संकट · क्युबा क्रांति · भान्सा बहस · एशियाई-अफ्रिकी सम्मेलन · ईटाई संशोधन · म्याकर्तिवाद · ओपरेशन ग्लेडियो · हेलस्टीन सिद्धान्त
कंगो संकट · चीन-सोभियत विभाजन · 1960 ऊ-2 घटना · सुँगुर आक्रमणको खाट · बर्लिन पर्खाल · क्युबा मिसाइल संकट · भियतनाम युद्ध · 1964 ब्राजीलियन कुर्सी डीटीटी · संयुक्त राज्य अमेरिका डोमिनिकन रिपब्लिक को (1965–1966) · दक्षिण अफ्रिका सीमा युद्ध · रोड्सियन बुश युद्ध · नयाँ अर्डरमा संक्रमण · डोमिनो सिद्धान्त · आषेआण घोषणा · लाओटियन नागरिक युद्ध · ग्रीक सैन्य कोन्टा को 1967–1974 · छ-दिनको युद्ध · उत्तेजनाको युद्ध · सांस्कृतिक क्रांति · चीन-भारतीय युद्ध · प्राग स्प्रिंग · गौलाश कम्युनिस्ट · चीन-सोभियत सीमा विवाद
डिटेन्टे · परमाणु गैर-प्रसार सन्धि · जोर्डन मा कालो सेप्टेम्बर · कम्बोडियन नागरिक युद्ध · ऋएअल्पोलितिक · पिंग पोंग डिप्लोमेसी · बर्लिनमा चार पावर सम्झौता · 1972 नेक्सन चीन भ्रमण गर्नुहोस् · 1973 चिली को सेना डीटीटी · योम किप्पा युद्ध · रणनीतिक शस्त्र सीमा वार्ता · अंगोला नागरिक युद्ध · मोजाम्बिकन नागरिक युद्ध · ओगेडेन युद्ध · चीन-अल्बेनियन् विभाजन · कम्बोडिया-भियतनाम युद्ध · चीन-भियतनाम युद्ध · ईरानी क्रान्ति · ओपरेशन कन्डक्टर · बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध · कोरियाली एयर लाइनहरु उडान 902
अफगानिस्तानमा सोभियत युद्ध · ईरान-इराक युद्ध · 1980 र 1984 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकका केटाकेटीस · ठोसता (सोभियत प्रतिक्रिया) · छोन्त्रस · केन्द्रीय अमेरिकी संकट · ऋय़ाण · कोरियाली एयर लाइनहरु उडान 007 · आर्चर सक्षम पार्नुहोस् 83 · स्टार वार्स · ग्रेनेडाको आक्रमण · मान्छे पावर क्रांति · तियानानमेन स्क्वायरको विरोध 1989 · संयुक्त राज्य अमेरिका पानामा आक्रमण · बर्लिन पर्खालको पतन · संशोधन को 1989 · घ्लस्नोस्त · फेरेस्त्रोइका
मङ्गोलिया मा लोकतांत्रिक क्रांति · यूगोस्लाभियाको विखण्डन · सोभियत युनिभर्सिटी को डिस्प्ले · चेकोस्लोवाकियाको डिस्प्ले
पूँजीवाद (शिकागो स्कूल · कीनेशियनवाद · ंओन्तरिस्म · णेओच्लस्स्सिचल अर्थशास्त्र · आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्र · थैचरर · रेगनोमिक्स) · साम्यवाद (मार्क्सवाद-लेनिनवाद · कास्त्रोवाद · एउरोचोम्मुनिस्म · घुएवरैस्म्म · झुचे · बायाँ कम्युनिस्ट · माओवादी · ष्तलिनिस्म · टितोइस्स्म · ट्रोत्स्क्यिस्म) · उदार लोकतान्त्रिक · सामाजिक लोकतान्त्रिक
आष्सेआण · सि आइ ए · आउनु · एएछ · ख्घ्भ · ंI6 · स्थिर · केजिबी
सक्रिय उपायहरू · ईश्वेस्तिअ · प्राभ्दा · रेडियो नि: शुल्क युरोप/रेडियो लिबर्टी · रातो घोडा · ट्आष्ष · आवाजको अमेरिका · रूसको आवाज
↑ "55 years ago the first Soviet ballistic missiles were delivered to Cuba", Ministry of Defense of the Russian Federation (Russianमा), ९ अगस्ट २०१७, अन्तिम पहुँच १२ मे २०१८।
↑ "Chronology 1: September 28, 1962 to October 26, 1962", The Cuban Missile Crisis, 1962, The National Security Archive, अन्तिम पहुँच अप्रिल ९, २०११।
↑ "Chronology 1: October 26, 1962 to November 15, 1962", The Cuban Missile Crisis, 1962, The National Security Archive, अन्तिम पहुँच अप्रिल ८, २०११।
↑ Jim Hershberg (Spring १९९५), "Anatomy ofaControversy:Anatoly F. Dobrynin's Meeting With Robert F. Kennedy, Saturday, 27 October 1962" (5), अन्तिम पहुँच मे २९, २०१२।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=क्युबा_मिसाइल_संकट&oldid=774415" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:१७, १९ मार्च २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।